Boeny – FDL: nahavitana fotodrafitrasa maro ny 11 tapitrisa euros | NewsMada
Boeny – FDL: nahavitana fotodrafitrasa maro ny 11 tapitrisa euros
Mitentina 11 tapitrisa euros ny azon’ny faritra Boeny tamin’ny Tahirim-bola ho an’ny fampandrosoana ifotony (FDL).
Marobe ny zava-bita tamin’izany, izay notsidihin’ny tale jeneralin’ity tahiry ity, ny 10 sy ny 11 avrily teo, tany Ampisikina Mahajanga. Tsy inona ireo zava-bita ireo fa trano fianarana ho an’ny CEG miisa 14, lycée iray miaraka amin’ny tranon’ny kilasy mandry zazavavy mahazaka mpianatra efatra. Samy miampy fampitaovana, trano fivoahana, vovon-drano, zaridaina fambolena anana ary làlan-tany mirefy 45 km ireo.
Andiany voalohany tamin’ny tahirim-bola FDL ny nanaovana ireo fotodrafitrasa ireo. Nampiasa ny vola ny kaominina miisa 14 sy ny Fivondronamben’ny kaominina ao amin’ny OPCI, ao Boeny.
Notsiahivin’ny talen’ny FDL fa famatsiam-bola avy amin’i Alemaina ity tahiry ity. Mitantana izany kosa ny Foibe jeneralin’ny FDL, eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Notsipihin’ny tompon’andraikitra hatrany fa tsy ny minisitera na ny FDL foibe sy ny faritra no misafidy ny toerana sy ny fotodrafitrasa hatao eny ifotony fa ny mponina. Manara-maso akaiky ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa kosa ny FDL.
Hanomboka ny volana septambra ho avy izao ny andiany faharoa amin’ny FDL ary hitombo 16 tapitrisa euros izany. Hisitraka izany ny kaominina rehetra ao Boeny, miisa 45, ankoatra an’i Mahajanga renivohitra. Mivelatra amin’ny sehatra maro ny tetikasa fampandrosoana ifotony hovatsina. Anisan’ny nangatahin’ny lehiben’ny faritra mpisolo toerana famatsiam-bola ny fampiharana ny Dinan’i Boeny Miray Dia, vao nasiam-panavaozana, ho fanatsarana ny fandriampahalemana any amin’iny faritra iny.
Mba hisian’ny fampandrosoana maharitra, nametraka komity misahana ny fanaraha-maso sy ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa vaovao ny minisitera.